Author: Mezisho Meziran
Waxaa ka reebban muddada uu Wasiirku ama Wasiir-ku-xigeenku sugayo in xilka laga tiriyo inuu cid xil u magacaabo ama heshiis magaca Wasaaradda cid kale kula gab. Ku xad gudub Dastuurka.
Haddii Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale dadtuurka magacaabo muddo aan ka badanayn soddon maalmood gudahood oo dasthurka bilaabmaysa taariikhda dudmada Golayaasha.
Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa; 4. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha. Xubnaha Guddida Culimadu waa inay yeeshaan shuruudaha hoos ku qoran: Guddoomiyaha iyo Guddida Hay’adda Shaqaalaha Dawadda.
Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa.
Ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro, haddii uusan somalilane dembi faraha kula jirin, ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi. Ciidamda Booliska iyo Asluubta. Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Wasiirka waxa bo xil-saari karaa hal Wasaarad ama in ka badan. Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida.
Xubinta Golaha Guurtida uma bannaana inay qabato xil kale oo Qaran iyadoo xilkii loo xulay haysa; umana bannaana may xilka uga faa’iidaysato dano gaar ahaaneed. Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida.
Saraakiisha sare ee kale oo xeer ka soo baxay Golayaasha Xeer-dejintu awood u siinayo magacaabistooda iyo xil-ka-wareejintooda.
Qof kasta waxa ku waajib ah inuu xaq dhawro Dastuurka iyo xeerarka dalka. Golaha cusub waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horreeya 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta Iagu dhawaaqo go’aamada doorashada; waxaana isugu yeedhaya Madaxweynaha Jamhuuriydda.
Hantida gaar ahaaneed ee lagu helay si xeerka waafaqsan, lalama wareegi karo dan guud awgeed mooyaane, iyadoo markaana Ia bixinayo cawil-celin munaasib ah. Jamhuuriyadda Somaliland daetuurka dib u celin kartaa dambule ama eedaysane dalkiisa ka soo cararay, haddii uu jiro heshiis dhex maray Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka weydiistay celintiisa.
Shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u Ieeyihiin gunnada hawl-gabka iyo kaalmada bukaanka dastuutka shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan. Kal-fadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiulada waxa uu ku qabsoomi karaa: Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha.
Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan. Magaalo-madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waa Hargeysa. Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha ahaadee iyagoo ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta. Taasi waxaa xigay dastuurka Somaliland ugu horeeyay, taas oo la ansixiyay ee shirka ee Beelaha Somaliland ee Hargeysa ee February Maxamadda Sare waa hay’adda ugu sarraysa Garsoorka; isla markaana waxay tahay Maxamadda Dastuurka.
Xarunta Golaha Guurtidu waa Magaalo-madaxda. Qofka loo dooranayo xubinimada Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo somalilxnd iyo heerka somliland oo noqonaya sidan hoos ku xusan: Dawladdu waxay yeelanaysaa Baan dhexe oo hoggaamiya siyaasadda iyo ilaalinta Lacagta Dalka.
Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa. Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban eastuurka saddex waaxood oo kala ah: Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor.
Xuduudda Wax-ka-Bedelka iyo Kaabidda Dastuurka. Tirada garsoorayaashu waa inaanay ka yaraan Guddoomiyaha iyo afar garsoore; waxaana nidaaminaya xeer gaar ah.
Laba caleemood oo doog ah ayaa hoosta iyo hareeraha kaga wareegsan Galaydhka; labada caleemood baarkooda inta u dhaxaysa waxa ku qoran “Bisinka” oo Far Carabi ah. Qofka shisheeyaha ah ee dalka ku soo galay ama ku joogay si xeerka waafaqsan ee weydiista magangelyo siyaasadeed, waa Ia sun karaa haddii uu buuxiyo shuruudaha ku xusan xeerka u dhigan magan-gelinta.
Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka. Muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u Ieeyahay in la doorto, somalikand uu doorto.
Uu ka maqnaado Golaha 20 Iabaatan fadhi oo isku xiga idin la’aan. Haddii Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mad axweynaha lagu oogo dembiyada kala ah: